Brother လေဆာပရင်တာကို linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Linux မှ
Luigys toro | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့ခေတ်တွင် GNU / Linux ဖြန့်ချိမှုအများစုသည်ခေတ်မီသော hardware များကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော် hardware ထုတ်လုပ်သူအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသော operating system ကို၎င်းတို့၏ဖြေရှင်းနည်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြုလုပ်ရန်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနှောင့်နှေးနေဆဲဖြစ်သည်။ များစွာသောလူတို့အတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Linux အတွက်ဇာတိဒရိုင်ဘာများရှိသောကြောင့် Brother အမှတ်တံဆိပ်ပရင်တာများကိုသုံးသောငါတို့သူများအတွက်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
ငါလက်ရှိရှိသည် Brother DCP-L2550DN လေဆာပရင်တာ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စက်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အရည်အသွေးကောင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အလျင်အမြန်ကျွန်ုပ်အားလျင်မြန်စွာပုံနှိပ်ရန်ခွင့်ပြုပါကဤပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုသောစျေးပေါသည့် TN TN2410 နှင့် TN2420 ကျည်တောင့်များရရှိရန်မှာအလွန်လွယ်ကူသည်။ Linux Mint မှာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အလုပ်လုပ်တာထက်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်အလားတူပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့သုံးစွဲသူတွေလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရှင်းပြတာကောင်းတယ်။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်ကိုအသုံးပြုသူတွေလုပ်ရမှာကပထမဆုံးလုပ်ရမှာက အစ်ကို linux ယာဉ်မောင်းစာမျက်နှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပရင်တာမော်ဒယ်အတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ဝေသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲအမျိုးမျိုး (CUPS, LPR, Scanner, ADS, laser printers, အခြားသူများအကြား) ဖြန့်ဝေသည်။ ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးထားသည်။ ထိုကြောင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ DCP-L2510D၊ Brother HL-L2310D နှင့် Brother MFC-L2710DN ပရင်တာများအတွက်တူညီသောယာဉ်မောင်းသည်အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Brother သည်ကျွန်တော်တို့အားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ hardware model နှင့်၎င်း၏ဗိသုကာပုံစံများအရအသုံးပြုရန်အတွက်တိကျသောလက်စွဲကို၎င်း၏ဒရိုင်ဘာတပ်ဆင်ခြင်းစာမျက်နှာတွင်ပေးထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းသည်ပရင်တာ၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ စက္ကူအမျိုးအစားသို့မဟုတ်သင်၏အရာတစ်ခုပင်အခြေအနေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Brother drivers စာမျက်နှာသို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ hardware နှင့် distro နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော driver ကိုကူးယူပြီးအောက်ပါ command ဖြင့် base packages များကိုတပ်ဆင်သည် -
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ pc ကို restart လုပ်ပြီး Brother support စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း driver များကိုတပ်ဆင်ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် System / Administration / Printers အပိုင်း (သင့် distro ၌သင့်လျော်သလို) နှင့်သင် install လုပ်ပြီးသော printer ကိုရွေးရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရင်တာအားမိခင်ဘာသာစကားဖြင့်သာသုံးနိုင်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Brother Laser Printer ကို linux မှာဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ငါ manjaro gnome အတွက်အစ်ကို dcp 7065dn ကိုသုံးပါနှင့်ယာဉ်မောင်း AUR ၌ရှိကြ၏။
ဤပရင်တာများသည်များသောအားဖြင့် rpm တွင် driver များရှိသည်။ archlinux အတွက် deb နှင့် derivat သည်ပုံမှန်အားဖြင့် AUR တွင်ဖြစ်သည်။ gentoo အတွက်ညီအစ်ကို overlay ရှိသည်။
ယာဉ်မောင်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ - open source လား။
ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည် Linux အတွက်မောင်းနှင်သူများဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းသည်မှာရင်းမြစ်များမရရှိနိုင်ပါ (၎င်းတို့သည် open source မဟုတ်)
အနည်းဆုံးတော့ညီအစ်ကိုကရီကိုထက်ပိုပြီးထောက်ခံတယ်။ ငါ့မှာ Ricoh multifunction SP310spnw ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို Linux မှာသုံးတဲ့အခါခေါင်းကိုက်တာများတယ်၊ ပုံနှိပ်တဲ့အပိုင်းကိုသာသုံးနိုင်တယ်။ Ricoh အထောက်အပံ့သည်လက်တွေ့တွင်မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး Linux အတွက် driver များရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်လိုသောအခါအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ... CUPS လည်ပတ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၌၎င်းမှာတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီး၊ သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းများဖန်တီးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေရန်သူတို့ကို Ricoh သို့ချက်ချင်းအီးမေးလ်ပို့သော်လည်းယနေ့အထိသူတို့သည်အီးမေးလ်လက်ခံရရှိမှုကိုပင်အသိအမှတ်မပြုကြပါ။ ငါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အခြား OS ကိုအသုံးပြုရမည်။
ငါအရမ်းစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ Brother လေဆာ HL-2135W wifi ကိုသုံးပြီး Linux ပေါ်မှာနှစ်အတော်ကြာနေပါပြီ။ အရမ်းပျော်တယ်
Puigdemont 64bits ဟုသူကပြောသည်
1210w သည် pkgbuild ကို အသုံးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတပ်ဆင်ထားသည်။ ကိုးကားအနည်းငယ်ပျောက်ဆုံးနေသည်၊ သို့သော်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
Brother မဝယ်နဲ့၊ HP မဝယ်နဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါ့။ ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့မှာ GNU / Linux အတွက် drivers တွေရှိတယ်၊ X နှစ်ကြာပြီးနောက်သူတို့သည် kernel အသစ်များအတွက် driver များကိုမွမ်းမံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအလုပ်မလုပ်တော့လျှင်သင့်ကိုလဲချန်ထားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသောကြောင့်မည်သူမျှ code ကိုပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်မှာ Brother DCP7065dn ကိုသုံးတယ်။
HP LaserJet Pro CP1025nw ကဲ့သို့သောအခမဲ့ဒရိုင်ဘာများမရှိသည့်ပရင်တာများရှိသောကြောင့် HP နှင့်လည်းသတိထားပါ။ နောင်တွင်ငွေညှစ်ခံရခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အခမဲ့ဒရိုင်ဘာများသာ ၀ ယ်ယူပါ၊ သို့မဟုတ်ပရင်တာအသစ်သို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုး (သို့) Mac OS လိုင်စင်အသစ် (သူတို့အတွက်အမြဲတမ်းဒရိုင်ဘာများ) ၀ ယ်ပါ။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို SHARP ပရင်တာကိုမဝယ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MX 2310U ကူးယူ / ပရင်တာရှိသည် - ပထမ ဦး ဆုံး linux အတွက်၎င်း၏ driver installer (http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/centro-de-descargas.htm?p=&q=MX-2310U&lang=ES&cat=0&type=1214&type=1215&os=&emu=) ဖိုင်နာမည်ပြောင်းခြင်းအမှားအယွင်းများစွာရှိသည်၊ ၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန် script ကိုထိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်၊ ဒုတိယအချက်မှာ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သုံးစွဲသူကုဒ်ပါသောကွန်ယက်တစ်ခုတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Linux ဒရိုင်ဘာကုဒ်ကိုထည့်ရန်နေရာမရှိကြောင်းထင်ရှားသည် ( Windows တွင်အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု - အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း - အသုံးပြုသူ) တွင်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲဒါကို GNU / Linux ကနေမသုံးနိုင်ဘူး၊ PPD ဖိုင်ပြောင်းတာလိုလှည့်ကွက်တွေသုံးခဲ့တယ်။https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) နှင့်စာဝှက်ခြင်းအတွက်ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာကိုအသုံးပြုသောယာဉ်မောင်းကိုပင်စမ်းကြည့်ပါ (https://github.com/benzea/cups-sharp).
ဦး စားပေးအစီအစဉ်: အခမဲ့ဒရိုင်ဘာနှင့်အတူ HP၊ စီးပွားဖြစ်မောင်းနှင်သူနှင့်အတူ HP၊ Sharp သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမပိုင်ဆိုင်ပါ။
၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ရန် binary လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ dcp 7065dn အမှု၌၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့မဟုတ်သောအစ်ကို binary ကိုငါသုံးလျှင်ဒရိုင်ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းကိုသုံးသည်။
အခမဲ့ဒရိုင်ဘာများမပါသောပရင်တာများဝယ်ယူခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းတို့သည်သင်အသုံးပြုနေသော operating systems များနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်း၏ဒရိုင်ဘာကိုမွမ်းမံပါက၎င်းသည်အခြားစနစ်သို့မဟုတ်အခြားပရင်တာ ၀ ယ်ရန်သင့်ကိုဖိအားပေးလိမ့်မည်ဟုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏လက်ထဲတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများပါသော HP သည်ပိုကောင်းသည်၊ HP LaserJet CP 1025nw ကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများရှိသည့် HP ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ Brother တွင်အားလုံးတွင်စီးပွားဖြစ်မောင်းနှင်သူရှိသော်လည်းအနည်းဆုံး၎င်းတို့တည်ရှိသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ SHARP copiers-printers သည် GNU / Linux အတွက် driver တွင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ရန်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသော code ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများမရှိပါက၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှပြုလုပ်သောကော်ပီများကိုကုမ္ပဏီကထိန်းချုပ်လိုပါက Linux မှ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးသည်။ ဥပမာ Sharp MX 2310U သည်၎င်း၏ PPD ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ပရင်တာကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ (https://github.com/benzea/cups-sharp).
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။ (နေ့၊ ည၊ စသည်) ဒီကွန်ယက်ပုံနှိပ်စက်များအတွက်စကင်နာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ်ကြိုတင်ကြေငြာထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။ ငါအလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် Brother ဘက်စုံသုံးမော်ဒယ်များစွာကိုသုံးသည်။ ဒရိုင်ဘာများတပ်ဆင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပရင်တာ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ရိုးရှင်းသည်၊ သို့သော်တခါတရံစနစ် (ယေဘုယျအားဖြင့် zorin os9lite) သည်ကွန်ယက်ရှိအချို့သောစကင်နာများကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီစကင်နာကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ (အိုင်ပီပုံစံမျိုးစုံပါတဲ့စကင်နာကိုမှတ်မိဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားသလဲ) ။ ငါရှာဖွေခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုအရှိဆုံးကတော့ ip နှင့်ပါသောစကင်နာအမည်တစ်ခုသည်ရိုးရိုးစကင်ဖတ်စာရင်းတွင်ပါသော်လည်းဘာမျှမ scan ပါ။ samsung multifunctions နှင့်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ညီအစ်ကိုများထက် simplescan စာရင်းတွင်များလေ့ရှိသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက scanner ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းဘေးကနောက်တစ်ခုကမတွေ့ပါ။ သူတို့တူညီတဲ့ကွန်ယက်၌ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခြင်း။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မိုက်မဲသောကြောင့်ဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သော်လည်း Lexmark ပရင်တာများ (Z11 LPT နှင့် X75 all-in-one) သည် Linux တွင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်မေးပါမည်။ Ubuntu 9.10 တွင် Z11 အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို kernel အဟောင်းကိုချပြီးအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်လား?
PS: သူတို့ကစော်ကားနိုင်တယ်၊ ငါထိုက်တယ်😉
ဤအရာကိုကြိုးစားကြည့်ပါ - Ubuntu 9.10 ကို virtualbox တွင် install လုပ်ပြီးထိုမှထို printer မှပုံနှိပ်ထုတ်ပါ။ သင်၏အလုပ်မှထုတ်ယူပါက၎င်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်သင်၏ linux မှသင်၏ linux သို့ဝေမျှရန်ကြိုးစားပါသို့မဟုတ်သင်၏ pdf ဖြင့်ပုံနှိပ်ပါ။ Ubuntu 9.10 မှရယူနိုင်ရန်စနစ်နှစ်ခုလုံးအကြားမျှဝေထားသောဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းရှိ pdfs ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကြိုးစားပါ။
၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ Windows တွင်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်က Windows XP နှင့်သင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး win15 သို့မဟုတ်7အတွက် driver မရှိပါ။
အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိပါကစီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ဘာမှမ ၀ ယ်ပါနှင့်။ ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာမင်းကပရင်တာကို wifi နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ... ငါကိစ္စမှာ MFC9330CDW ပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
ငါ့မှာ Brother HL-L2340DW ရှိပြီး၎င်းကိုဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့်ငါဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပရင်တာကို USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်မှာပြnoနာမရှိသော်လည်း Wifi မှအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
Brother သည်အနည်းဆုံး Ubuntu အတွက် Driver Install Tool ဟုခေါ်သည့်တစ်စုံတစ်ရာအားသင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်း (သို့မဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်) လိုအပ်သောယာဉ်မောင်းများဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်အစ်ကိုကညီအစ်ကိုကိုဒီမှာရှင်းပြပါမယ်။
ပြproblemနာက URI တွင်မည်သည့်အရာထည့်သွင်းရမည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရှာဖွေခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်မှာဤဆောင်းပါးတွင် jose1080i မှမှတ်ချက်တစ်ခုတွင်အဖြေကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ညီအစ်ကိုမော်ဒယ်အားလုံးမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ငါ့မှာအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်လေဆာရှိတယ်။ လမ်းမရှိဘူး
Enrique Gallegos ဟုသူကပြောသည်
ငါ Linux Mint 19 Cinnamon 64-bit ကိုသုံးတယ်၊ Brother HL-1110 ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတဲ့ monochrome လေဆာပရင်တာကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Wifi အစားကျွန်တော့်နှလုံးကို (USB ကတဆင့်သွားတယ်) အုပ်ချုပ်မှုထဲမှာပေါ်လာတယ်၊ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတောင်ရွှေ့တယ်။ ငါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းဖို့« windols »ရှိရမည်, အဘယ်သို့ကောင်းကောင်းသွားရာ။
Enrique Gallegos သို့ပြန်သွားပါ